HAWL-GAL: Real Madrid Oo Diyaar U Ah In Ay Duqayso Man United & Tottenham Iyo Dalabka Ay Ka Gudbinayso Marcus Rashford & ­Christian Eriksen. - GOOL24.NET
Maamulka kooxda Real Madrid ee uu Florentino Perez hogaaminayo ayaa doonaya in ay dib u saxaan qaladadakii ay suuqa kala iibsiga ka soo sameeyeen xagaagii dhawaa waxayna doonayaan in suuqa bisha January ay kooxda keenaan wajiyo cusub oo uu Solari guul ugu hogaamin karo Los Blancos.
Real Madrid ayaa ka soo baxday waqti aad u adag kadib markii ay maamulka Los Blancos ku fashilmeen in ay kooxda keenaan badalkii Crisitano Ronaldo oo Juventus ku biiray waxayna taasi galaafatay Julen Lopetegui oo dhawr bilood kadib shaqada kooxda laga caydhiyay.
Laakiin Santiago Solari ayaa xalaada kooxda badalay inkasta oo aanu wali marin wax tijaabo ah adag ah maadaama oo ayna Real Madrid waqtigiisa la ciyaarin kooxaha awooda leh ee horyaalka La Liga balse Madrid ayaa doonaysa in ay dalabyo ka gudbiso Marcus Rashford iyo ­Christian Eriksen.
Wargayska The Sun ee England ka soo baxa ayaa shaaciyay in maamulka Madrid ay dalab 90 milyan gini ah ku doonayaan Marcus Rashford oo Manchester United ka tirsan iyo waliba xidiga khadka dhexe ee kooxda Tottenham ee Christian Eriksen.
Waxaa warbixintan lagu sheegay in Real Madrid ay ku qanacday qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee uu Marcus Rashford ku soo bandhigay kulankii Croatia isla markaana ay u arkaan in uu noqon karo badalkii Cristiano Ronaldo.
Real Madrid ayaa doonaysa in ay 50 milyan gini ku dalbato Marcus Rashford oo aan boos joogto ah ku haysan shaxda Jose Mourinho kaas oo shan kulan oo kaliya xili ciyaareedkan ku soo bilawday kooxdiisa Man United waxayna maamulka Bernabeu doonayaan in 21 sano jirkan ay kooxdooda ku soo xoojiyaan.
Wargayska The Sun ayaa warbixintiisa ku xusay in Real Madrid ay goob joog ka ahayd kulamadii ugu danbeyeay ee Man United balse markii hore la filayay in ay qiimaynayaan Pual Pogba iyo Romelu Lukaku balse ay hadda cadaatay in ay doonayan Rashford.
Dhinaca kale Real Madrid ayaa qorshaysatay in ay 40 milyan gini kula soo wareegto khadka dhexe ee kooxda Tottenham ee Christian Eriksen kaas oo ay 18 bilood ka hadhsan yihiin waqtiga uu dhacayo heshiiskiisa Spurs.
Christian Eriksen oo 26 sano jir ah ayaa Tottenham ka soo tirsanaa tan iyo 2013 kii markaas oo uu 11.5 milyan gini kaga soo wareegay Ajax laakiin waxaa hadda istaagay wada xaajoodyadii ay Tottenham ku doonaysay in ay heshiis cusub kaga saxiixato.
Si kastaba ha ahaatee, Florentino Perez iyo maamulkiisa Madrid ayaa doonaya in ay 90 milyan gini ku soo xero galiyaan Marcus Rashford iyo Christian Eriksen balse ilaa hadda lama oga sida ay kooxaha Manchester United iyo Tottenham ku aqbali karaan dalabyadan oo aan u muuqan kuwo u dhigma qiimaha dhabta ah ee labadan xidig.
khadar xuseen says:
waxaan jeclahay inaan mar walba akhristo kooxda ka dhisan Spain magaalada mariid